VeraCrypt 1.24-Update7 na-ewebata ihe mgbanwe 30 na ndị a bụ ihe ndị kachasị mkpa | Site na Linux
Nwepụta nke ọhụrụ version nke - VeraCrypt 1.24-Mmelite7, nke na - ewepụta fọk nke usoro ezipu disk nke TrueCrypt diski kwụsịrị.
VeraCrypt pụtara maka overriding TrueCrypt's RIPEMD-160 algorithm na SHA-512 na SHA-256, na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke esh iterations, na-eme ka usoro iwu ụlọ maka Linux na macOS dị mfe, yana idozi nsogbu akọwapụtara n'oge usoro nyocha usoro iyi TrueCrypt.
N'otu oge ahụ, VeraCrypt na-enye usoro nkwado maka nkewa TrueCrypt ma nwee ngwaọrụ iji tọghata nkewa TrueCrypt na usoro VeraCrypt.
A na-ekesa koodu nke ọrụ VeraCrypt mepụtara n'okpuru ikikere Apache 2.0, ma na-aga n'ihu na-enyefe ego mgbazinye ego TrueCrypt n'okpuru License License.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na VeraCrypt 1.24-Update7?
2 Esi tinye VeraCrypt na Linux?
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na VeraCrypt 1.24-Update7?
Na ụdị ọhụrụ a nke VeraCrypt 1.24-Update7 awade banyere 30 mgbanwe, nke gunyere nchedo ozo banyere ojiji nke otu okwuntughe, PIM, na igodo faịlụ maka izoputa na nke ozo.
Nakwa dị ka a Generator na-enye ọnụọgụ ọnụọgụ na-enweghị usoro nwere FIPS mode nyeere.
Na Linux na macOS, a na-ahapụ ya ka ịhọrọ usoro faịlụ ọzọ karịa abụba maka mpụta nkebi.
E wezụga nke ahụ atụkwasịwo akụkụ dị ukwuu nke ndozi ndị akọwapụtara maka ikpo okwu Windows, iji maa atụ, akwadoro Windows 10 Modern Standby na Windows 8.1 Jikọrọ Njikere, etinyere usoro ịkekọrịta ọkọlọtọ ọkọlọtọ, agbakwunyela nkọwa nke hibernate na ụdị buut ngwa ngwa
Ekepụrụ iche dị iche iche nke ebe nchekwa dị mkpa tupu ojiji, na-enweghị ịdabere na ebe nchekwa :: Ihichapu oku, nke enwere ike imetụta usoro njikarịcha.
Y agbakwunyere nkwado maka FS Btrfs Mgbe nkewa na na static ewuli, na wxWidgets kpuchie e emelitere ka mbipute 3.0.5.
Esi tinye VeraCrypt na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwá ọrụ a na sistemụ ha, ha nwere ike ịme ya site na isoro ntuziaka ndị anyị na-eke n'okpuru.
Ole ndị ka ha bụ Arch Linux, Manjaro, Arco Linux ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ emepụta Site na Arch Linux, ha nwere ike iwunye ngwa ọrụ ahụ ozugbo site na enyemaka nke Pacman ma ọ bụ site na nchekwa AUR.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwụnye ya na pacman, naanị mepee ma nwee ọnụ na ya, ha ga-eme iwu a:
N'ihe banyere ịwụnye site na AUR, naanị ihe ha kwesịrị ime bụ ka ha tinye ego ma tinye ọkachamara AUR na sistemụ ha.
Iwu ịwụnye (ọ bụrụ na ị nwere yay, ọ bụrụ na ọ bụ nke ọzọ, ha nwere ya) bụ:
Ugbu a, n'ihe banyere ndị Debian, Ubuntu, ndị ọrụ CentOS ma ọ bụ ụfọdụ emepụta na ndị a nwere ike ịduzi gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ahụ na ngalaba nbudata ya ị ga-ahụ nchịkọta ndị agbakọtara maka nsụgharị dị iche iche nke nkesa, ma GUI ma ọ bụ nsụgharị CLI.
N'ihe banyere ndị na-eji Debian 10, ị nwere ike ibudata ụdị GUI na:
Efe Idị CLI:
Ọ bụ maka ndị bụ ndị ọrụ Ubuntu 20.04, mbipute GUI:
Ma ọ bụ maka 18.04 LTS:
Y Enwere ike ịnweta mbipụta CLI maka 20.04 na:
Maka 18.04 LTS:
Maka 16.04 LTS:
Ugbu a n'ihe banyere ndị ahụ ha na-eji utu (Raspbian 10) maka GUI mbipute:
Ma ọ bụ ụdị CLI:
Finalmente nwere ike iwunye deb ngwugwu (n'agbanyeghị ihe nkesa ọ bụ, ọ bụrụ na Debian, Ubuntu wdg) site na ime iwu ahụ:
Ma ọ bụ ghara nke ahụ maka ndị na-ebudata ụdị CLI:
Maka ndị dị Ndị ọrụ Centos, Nwere ike ibudata ụdị GUI na:
Ma ọ bụ ndị ọrụ OpenSUSE:
Ọ bụ ezie na a na-ebudata ụdị CLI maka CentOS na:
Ha wụnye ngwugwu GUI na iwu:
Na ụdị CLI nwere:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » VeraCrypt 1.24-Update7 na-ewebata ihe mgbanwe 30 na ndị a bụ ihe kachasị mkpa